Walaal waxaad awoodo Agoonta ugu hagaaji Koontada looga furay Xawaaladda Amaana xarunteeda dhexe ee DUBAI.
Account Nr. 2002-0017 ama riix halkaan
Walaalayaal mahad oo dhan Alle (SW) ayaa iska leh, nabadgelyo & naxariista Eebbana dushiisa ha ahaato nebigeenna Muxammed, iyo Ehelkiisa, Asxaabtiisa dhammaantood (Aamiin).
"Ogoow quruxi waa diin, dawo guurna waa samir" halku dhiggaas kore waxa uu cinwaan u yahay gabaygan lagu ammanayo hablaha muslimaadka ah ee jirkooda u daboolay sidii ilaahey u dooray, dhanka kalane abwaanku wuxuu kaaga digayaa kuwa caariyaadka ah ee aan u labisan sidii Alle (SWT) u amray.
Dadku magaca guud iyo dusha waa ka siman yahay misna kala damiir roon, dariiqaad mareysiyo lama diidi karo calaf, haddana dood kalaa tiri dammanihii hurdaayaa dibi dhalay saciisuye illeyn doqoni calaf maleh.
Warse waxaad ku deydaa derejada Illaahey ruux dadaala baa hela, adna daahir saaxiib guur doon haddaad tahay aan kula dardaarmee ha igu diidin waanada, dab nimaan ku joogsanin dambas kama fogaadee.
Biyo waxa la doogtaa inta roobku da'ayee dulucdu yey ku dhaafine dulka dhegaha maqalkiyo i amaahi dareenka.
Daa'iman rag iyo dumar Allaa nolol isugu daray qofna kali ma degi karo, dunida raaxadeeduna marwo kaa dambeysiyo waa lammaane daacada.
Deyra yey ku raacine intaan hooy lawada degin, midda damacu kaa galay dabar iyo hogaan iyo hubso diin ma leedahay.
Da'da maanta joogtiyo ogoow dumarku waa laba, degga rabbi hanuunshoo ka dahiran xumaanoo, daacad kuugu adeegtoo dar ilaah kuu adeecda, iyo deysan kheyrkiyo xaqqa laga dabooloo damiirkiyo xishoodkiyo ka maran dux iyo iimaan kala dooro labadaas.
Dantii mooge weligiis dabin kama fogaadee daahiroow ubadkaaga hooyo fiican u door, abaar diirataa iyo qofna dab iyo meel kulul doog iyo xareed iyo har ku doorsan maayee, dumarkaa xijaabane sidii ilaaheey u dooray u daboolay jirkooda mid ka dooro saaxiib, ogoow quruxi waa diin dawo guurna waa samir.
Kuwa damacu waalee midabkoodii doorshee difaacii jirkoodiyo iska diiray maqaarkee dabka saari karin shaah damac yaanu kaa gelin, caariyaadka diriciyo marada dacalka feeydane nin kastaahi daawado dadka kama xigtide joog.
Daawashada aflaantiyo damman hees iyo muusik danteedii ku iloowday, dulmi iyo xan mooyee ka maran dux iyo iimaan, dooqeeygaa ku raaciyo dadkaan kuugu jecelahay, daraadaa ma seexdoo anaa adiga kaa daran, dhowr maalin dabadeed xiisuhu markuu demo dacar noqoy jaceylkii dudumo wehel ma noqotee.
Muran iyo dagaal iyo adaan dunida kuunacay ifur ku dooni maayee i maqashii dalaaqada, ilaaheey ku dooriye madaxeyga ii daa, eray derisku soo baxo waxaa kaaga duug roon inaad doob ahaatee, qalbigii daxaleysta waanadu ma deeqdee ka durug labada daarood midna darajo malahane, guri dumay ma fududee.
Deyra yey ku raacine intaan guri lawada degin midda damacu kaa galay dabar iyo hogaan iyo hubso diin ma leedahay.
Dadka kii ilaaheey kheyr ladoono dhammaantii diintuu waafajiyaahe dumarkaa xijaabane sidii ilaaheey u dooray u daboolay jirkooda mid ka dooro saaxiib, ogoow quruxi waa diin dawo guurna waa samir.
Daruur soo hillaacdiyo dayaxoo habeen bara sacab lama dul saaree, xuural ceynta dunidiyo duca qabooyinka dhowrsan duruuftii ku haysiyo danta kuguma nacayaan, deyro iyo saluug maleh, dembi iyo xasarad ma leh, dood iyo qilaaf maleh, wax islaamku diidayne damiirkoodu ma ogola, daartii la geeyana marna nuurku kama damo, ducadiyo adkaartana kama daalo afkoodu, munkar iyo durbaan iyo aroos looma soo digo, daaw dhaafka guriyo ma ogola daf iyo miriq, guriga daaradiisiyo duruustiyo tacliintiyo dugsiga kama fogaadaan, degenaanta edebtiyo samirkiyo dulqaadkana qalbigaa ku diirsada, dugsi lagu nagaadiyo derin aad ku gama'diyo soo dhaweyn ku deeqdiyo, daryeel aad ku qanacdiyo xormo ruux aad dabaqdiyo, daacad kuu adeegtiyo deymo aad ku faraxdiyo, dibno hadal macaan iyo gacan dabacsan naxariis kuwa loogu doow galay nin helaa ma daayee,
Dadkoo jiifa badankii intaan shiikhu daakirin biyo diiran oo kulul marwo kuu diyaarida, dar allaan ku dhaartaye midkii loogu daro calaf liibaanta dunidiyo daarta aakhiroow helay, dumarkaa xijaabane sidii ilaaheey u dooray u daboolay jirkooda mid ka dooro saaxiib, ogoow quruxi waa diin dawo guurna waa samir.
agoonta@agoonta.net ama kaafil@agoonta.net
Copyright � 2007 All Rights Reserved to agoonta.net, Designed by Xasan C. Xuuriye